Resident Feature: Magdalena Schwarz, Yoga Instructor
"I’m from Poland. I love nature. I like discovering and checking new ways of staying fit, healthy and peaceful. In everyday life and in yoga too, I prefer holistic approach from different perspectives." - Magdalena Schwarz
How did you get into yoga? / How long have you been practicing yoga?
Once in my hectic and stressful business life, I looked for something that would help me to find inner balance and take care of my health. And it was almost 20 years ago, when I started to practice yoga.
My first yoga course was in India in 2007. Then, in 2014 I have finished the teacher training on Bali.
တစ်ချိန်တုန်းက ကျွန်မရဲ့ ရှုပ်ထွေးပြီးဖိစီးမှုတွေရှိခဲ့တဲ့ စီးပွားရေးလုပ်နေစဉ်တုန်းကတောင် ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း စိတ်ငြိမ်အေးချမ်းမှုရဖို့နဲ့ ကျန်းမာရေးကိုအထောက်အကူပြုမယ့် အရာတွေကို အမြဲရှာဖွေပြီးလုပ်ဆောင်ခဲ့လေ့ရှိပါတယ်။ ယောဂကို စတင်ပြီးလေ့လာလိုက်စားတာဆိုရင်လည်း နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်ခဲ့ပါပြီ။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်က ကျွန်မရဲ့ ပထမဆုံး ယောဂအတန်းကို အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ စတင်သင်ကြားပြသခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၄ မှာတော့ ဘာလီမှာ ယောဂဆရာဖြစ်သင်တန်းကို အောင်မြင်စွာနဲ့ ပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်။
What inspires you about teaching yoga?
…that I can share it with others, helping them to find balance, strength and peace in themselves. I believe you can use it in everyday life and yoga is just the tool to discover yourself and power within you.
I also learnalot from my students. I appreciate their feedback, what they like or what is more challenging, how they feel, what are their needs and impressions.
So it’s likeaflow of exchange between us, that is very inspiring for me, too.
ယောဂသင်ကြားပေးရတာက စိတ်အားထက်သန်မှုကို ဘာကြောင့်ဖြစ်စေလဲဆိုတော့ အခြားသူတွေကို စိတ်ငြိမ်အေးချမ်းမှု၊ ခွန်အား၊ ဟန်ချက်ညီမှုတွေကို ရှာဖွေတွေ့ရှိအောင် ကူညီပေးနိုင်တာကို စိတ်ကျေနပ်ရလို့ပါ။ ယောဂဆိုတာက သင့်ကိုယ်တွင်းမှာရှိတဲ့ ခွန်အားစွမ်းရည်ကို သင်ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတသွယ်ဖြစ်ပြီး နေ့စဉ်ဘဝမှာလည်း အသုံးချနိုင်တယ်လို့ ကျွန်မကတော့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ကျွန်မရဲ့သင်တန်းသားတွေဆီကနေလည်း အများကြီး ပြန်လည်သင်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ဆီက ရရှိတဲ့ ထင်မြင်ချက်တွေ၊ သူတို့ဘယ်လိုယောဂကျင့်စဉ်တွေကိုလေ့ကျင့်ရတာနှစ်သက်လဲ၊ ဘယ်လိုမျိုးကျင့်စဉ်တွေက သူတို့အတွက်ခက်ခဲပင်ပန်းစေလဲ၊ သူတို့ရဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေနဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို ပြန်လည်ကြားသိရတာက ကျွန်မအတွက် အလွန်အဖိုးတန်ပါတယ်။
I combine different types of yoga and also some elements of other physical trainings and self-development workshops. Usually, I createasequence of postures (asanas) of traditional Hatha Yoga and dynamic Ashtanga Yoga into Vinyasa Flow of movements and breath.
Sometimes, during calm and slow yoga I use more elements of Yin Yoga and breathing practice with longer relaxation or meditation.
ကျွန်မက ယောဂကျင့်စဉ်အမျိုးမျိုးကို ပေါင်းစပ်ပြီးသင်ကြားပေးဖြစ်ပါတယ်။ တခါတလေဆိုရင် ခန္ဓာဗေဒဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ခန်းတွေ၊ အခြားသော self-development သင်တန်းတွေကိုလည်း သင်ကြားပြသပေးလေ့ရှိပါတယ်။ များသောအားဖြင့် Hatha လို့ခေါ်တဲ့ ရိုးရာယောဂကျင့်စဉ်နှင့် Ashtanga လို့ခေါ်တဲ့ ယောဂကျင့်စဉ်တွေက ပုံစံတွေကို ပေါင်းစပ်ဖန်တီးပြီး Vinyasa အသက်ရှုနည်းတွေ၊ လှုပ်ရှားမှုတွေအဖြစ်ပြောင်းလဲ လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးဖြစ်ပါတယ်။ တခါတရံ အနှေးယောဂကျင့်စဉ်တွေကိုလုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာဆိုရင် Yin ယောဂကျင့်စဉ်တွေကို အသုံးပြုလေ့ရှိပြီး စိတ်တည်ငြိမ်မှုကိုပိုမိုရရှိနိုင်တဲ့ အသက်ရှုလေ့ကျင့်ခန်းတွေနဲ့ သင်ကြားပေးလေ့ရှိပါတယ်။
….that I can adjust these different elements to the level of advancement and students’ needs.
I like to create my own tailor-made program for the class, but also go with the flow.
သင်တန်းသားတွေရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့အညီ အမျိုးမျိုးသော နည်းလမ်းကျင့်စဉ်တွေကိုချိန်ညှိပြီး ပိုမိုအဆင့်မြင့်တဲ့ အဆင့်တခုရောက်အောင်အထိ နည်းပြသင်ကြားပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် နှစ်သက်သဘောကျမိပါတယ်။ ကျွန်မက သင်တန်းတွေအတွက် ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးပြုလုပ်ထားတဲ့ နည်းလမ်းတွေနဲ့ သင်ကြားပြသပေးရတာကို ကြိုက်နှစ်သက်ပါတယ်။
Yes, anyone who only wants. It’s the matter of attitude and choosing the class withacertain level of intensity andateacher we feel comfortable with.
During yoga practice, you can chooseadifferent variation ofaparticular asana, that fits your body needs and possibilities.
It’s important to be patient and respect your body limits for here and now. After some time, you will notice you can go further and deeper inayoga posture.
I teach my students to practice for 80-90 % of their possibilities instead of reaching their maximum and putting too much pressure on body. Thanks to this you leave some space for deeper and more conscious practice along with breath. Soon you will discover how you body beautifully responds and gradually changes.
ယောဂကိုတကယ်လေ့လာလိုက်စားလိုသူတွေအနေနဲ့ ယောဂကနေ ရနိုင်တဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ အရေးကြီးဆုံးကတော့ လုပ်ချင်စိတ်ရယ်၊ ကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေမယ့်သင်ကြားပြသသူရယ်၊ မိမိနဲ့ကိုက်ညီမယ့် အဆင့်ကိုသင်ကြားပြသပေးမယ့်အတန်းရယ်ကို ရွေးချယ်တတ်ဖို့ပဲလိုပါတယ်။ ယောဂကျင့်စဉ်ပြုလုပ်နေစဉ်အတွင်းမှာ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ လိုအပ်ချက်နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ ကျင့်စဉ်ပုံစံအနေအထားတွေကို ရွေးချယ်လေ့ကျင့်ပေးလို့ရပါတယ်။ သင့်ကိုယ်ခန္ဓာကခံနိုင်စွမ်းပေါ်မူတည်ပြီး စိတ်ရှည်မှုရှိဖို့ကလည်း အရေးကြီးပါတယ်။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ ပိုပြီးခက်ခဲနက်နဲတဲ့ ယောဂကျင့်စဉ်တွေကို ပြုလုပ်လာနိုင်တာကို သတိပြုမိလာပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်မကတော့ ကျွန်မရဲ့သင်တန်းသားတွေကို သူတို့လုပ်နိုင်စွမ်းအကုန်လုံးကို အသုံးချပြီး ခန္ဓာကိုယ်ကို အရမ်းဖိအားပေးတာမျိုးတွေလုပ်ဆောင်စေတာထက် သူတို့လုပ်နိုင်တာရဲ့ ၈၀-၉၀% လောက်ကိုသာ လေ့ကျင့်ဖို့ သင်ကြားပြသပေးလေ့ရှိပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးလုပ်ဆောင်စေခြင်းက အသက်ရှုလေ့ကျင့်ခန်းအတွက် ပိုပြီးအာရုံစိုက်မိပြီး အကျိုးလည်းပိုရှိစေပါတယ်။ အချိန်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ပြောင်းလဲလာတဲ့ တုံ့ပြန်မှုတွေကို ကိုယ်တိုင်သိရှိခံစားလာနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
It has helped me to build my strength and flexibility. I feel lighter and more powerful at the same time. I have become more conscious of my body posture, movements and needs. More specific, for instance, yoga has helped me to cope with my back pain.
But also, I has learnt through yoga how to go with the flow, how to cope with fear, stress and pressure.
ယောဂလေ့ကျင့်ခြင်းက ကျွန်မကို ခွန်အားနှင့် ပျော့ပြောင်းမှုကို ဖန်တီးတည်ဆောက်ရမှာ အကူအညီဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မအနေနဲ့နေထိုင်ရတာ ပိုမိုပေါ့ပါးလာပြီး တချိန်တည်းမှာပဲ ပိုပြီးခွန်အားတွေရရှိလာတယ်လို့လည်းခံစားရစေပါတယ်။ ကျွန်မအနေနဲ့ ကျွန်မရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားသွားလာမှုတွေ၊ လိုအပ်ချက်တွေ၊ အနေအထားတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပိုပြီး အာရုံစိုက်မိလာပါတယ်။ ပိုပြီးတိတိကျကျ ဥပမာပေးရရင်တော့ ယောဂလေ့ကျင့်ခြင်းကြောင့် ကျွန်မရဲ့ နောက်ကျောနာရောဂါကို အတော်အသင့်သက်သာလာအောင် ကုစားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ယောဂကြောင့် စိတ်ဖိစီးမှုတွေ၊ အကြောက်တရားတွေကို ဘယ်လိုမျိုး ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရမလဲဆိုတာကိုလည်း ပိုမိုနားလည်လာခဲ့ပါတယ်။
BOTH and one influences another and then reverse.
In yoga, the same as in life….
ကျွန်မအနေနဲ့တော့ နှစ်မျိုးစလုံးလို့ယူဆပါတယ်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရော စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကရော နှစ်မျိုးစလုံးက အပြန်အလှန် လွှမ်းမိုး အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေ ရှိနေပါတယ်။
JUST START, without any particular expectations, keeping mind and body open for new experience.
Be patient and persistent, but have fun, too. In yoga, as in everyday life, it’s about keeping the balance between these two.
DO NOT COMPARE WITH OTHERS. You are unique, also with your so called limits.
Since you embrace this fact with self-awarness and kindness, they will start to vanish…
DO NOT TAKE YOGA PRACTICE TOO SERIOUS… AND GO WITH THE FLOW…
ပေးချင်တဲ့ အကြံကတော့ တစ်စုံတစ်ခုပြန်လည် ရရမယ်ဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေ ထားမနေဘဲ စတင်လိုက်ပါ။ စိတ်ရော ခန္ဓာကိုယ်ကိုပါ အတွေ့အကြုံအသစ်တွေရရှိအောင် ပြင်ဆင်ပြီး စတင်ဖို့လိုပါတယ်။ စိတ်ရှည်ပြီး စွဲစွဲမြဲမြဲလုပ်ဖို့လိုပါတယ်။ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လုပ်ဆောင်ဖို့ကလည်း အရေးကြီးပါတယ်။ ယောဂမှာရော၊ နေ့စဉ်ဘဝမှာပါ အဲ့အရာနှစ်ခု ညီညွတ်မျှတနေဖို့က အရေးကြီးပါတယ်။
ကိုယ့်ကိုကိုယ် အခြားလူတွေနဲ့ မနှိုင်းယှဉ်ပါနဲ့။ ဘယ်သူမဆို တဦးချင်းစီမှာ ထူးခြားမှုတွေရှိနေပြီးသားပါ။ အဲ့အချက်ကို လက်ကိုင်ထားပြီး ကြင်နာမှုတွေ၊ မိမိကိုယ်ကိုသိရှိမှုတွေသာ ရှိမယ်ဆိုရင် ကန့်သတ်ချက်တွေက တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ပျောက်ကွယ်သွားပါလိမ့်မယ်။ ယောဂကျင့်စဉ်တွေကို အရမ်းခက်ခဲစည်းကမ်းကြီးတယ်လို့ မသတ်မှတ်ပဲ စီးဆင်းမှုနဲ့အတူ လိုက်ပါပြုလုပ်ဖို့ပဲလိုအပ်ပါတယ်။